लाखौँ वर्षसम्म ४२ अर्ब डायनोसरले गरे पृथ्वीमा राज ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
लाखौँ वर्षसम्म ४२ अर्ब डायनोसरले गरे पृथ्वीमा राज !
आजभन्दा करोडौँ वर्ष पहिला डायनोसरले पृथ्वीमा राज गरेको थियो । यस बेला डायनोसरका विभिन्न प्रजातिहरु पृथ्वीमा पाइन्थे । यसमा केही शाकाहारी थिए भने केही मांसाहारी थिए । वैज्ञानिकको अध्ययनअनुसार लगभग ६.६ करोड वर्ष पहिला एक शहरको आकार जत्रो ठूलो एस्टेरोयड पृथ्वीसँग ठोकिएको थियो ।
यो यति ठूलो र भयानक थियो कि, यसका कारण डायनोसरका साथसाथै पृथ्वीमा ७५ प्रतिशत जमीन विलुप्त भयो । यो क्रममा एक अध्ययनले अनौठो खुलासा गरेको छ । अध्ययनका अनुसार लाखौँ वर्ष पहिला पृथ्वीमा ४२ अर्ब डायनोसरको राज थियो । यो अध्ययन बर्कलेमा क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिकले गरेका थिए । उनीहरुबाट टायर्यानोसोरस (टी रेक्स) नामक डायनोसरको प्रजातिको आकार, उर्जा आवश्यक्ता र लैंगिक परिपक्वताको आधारमा अध्ययन गरिएको हो ।
डाइनोसर करिब १ लाख २७ हजार पिढीसम्म जीवित रहेका थिए । यसको आधारमा उनीहरुले पृथ्वीमा यसको कुल संख्या १४ करोडदेखि ४२ अर्बको बीचमा रहेको बताएका छन् । औसतमा मान्ने हो भने यो संख्या २.५ अर्ब थियो । यस अध्ययनका प्रमुख चार्ल्स मार्सलले अध्ययनको यो अनुमान आउने शोधका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनका अनुसार त्यो बेला डायनोसरका मजबुत मुख र दाँतहरु थिए । चार्ल्स मार्शल यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया म्यूजियम अफ पेलियोन्टोलोजीका निर्देशक हुन् ।
मार्शलको अध्ययनका अनुसार डायनोसरको यो जनसंख्या उत्तरी अमेरिकामा धेरै थियो । उनको टीमले डायनोसरको जनसंख्या पत्ता लगाउनको लागि जीव विज्ञानको उपयोग गरेका थिए । यो नियमका अनुसार जनावर जति ठूलो हुन्छ, त्यसको जनसंख्या त्यति नै कम हुने विश्वास गरिन्छ । यसको निष्कर्ष उनीहरुले साइन्स जर्नलमा प्रकाशित गरेका छन् । यो रिसर्चमा यो पनि पत्ता लागेको छ कि, टी रेक्स १४ बाट १७ को उमेरको बीचमा डायनोसर लैंगिक परिपक्व हुने गरेको पनि पत्ता लागेको छ ।
यो प्रजातिको डायनोसरको अधिकतम आयु २८ वर्ष थियो । चार्ल मार्शलले यो पनि भनेका छन् कि, विभिन्न क्षेत्रबाट टी रेक्सका १०० जीवाश्मलाई अहिलेसम्म खोजिएको छ ।